Nosy Koh Chang. Pattaya. Thailand ~ Journey-Assist - Ahoana ny fomba hahatongavana amin'izany. vidin'ny
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Pattaya » Nosy Koh Chang. Pattaya. Thailand
Fijery feno ny nosy Koh Chang (Koh Chang). sary
Koh Chang no faha-3 lehibe indrindra amin'ny nosy Thai (faharoa ihany ny an'i Samui sy Phuket). Ny fizahan-tany tamin'ity nosy ity dia novolavolaina vao haingana.
Ny mpizahatany voalohany teto dia mpanamory kitapo nanomboka tamin'ny sambo tamin'ny jono tamin'ny taona 1970. Taty aoriana, Koh Chang dia voafidy Thais manan-karena izay tonga taty Bangkok indrindra tamin'ny faran'ny herinandro.
Ilay nosy dia 310 km miala ao renivohitr'i Thailand, akaikin'ny sisin'ny Kambodziana. Koh Chang dia ampahany ao amin'ny vondronosy, izay antsoina koa hoe Koh Chang. Ny velaran'ny velarantany dia 215 metatra toradroa. km.
Betsaka ny Rosiana amin'ny Ko Chang
Mandra-pahatongan'ny taona 2010, dia tsy fahita firy ireo mpizahatany avy any amin'ny firenena miteny rosianina. Na izany aza, ankehitriny ny fiteny Rosiana dia ho re eto isan'andro sy amin'ny toerana rehetra.
Koh Chang manana trano fisakafoana Rosiana be
Ankehitriny dia mivarotra fitsangatsanganana amin'ireo hotely misy amin'ity nosy ity koa ireo masoivoho fitetezam-paritany Rosiana. Ankoatr'izay, ny orinasa mpitety Thailandey eo an-toerana dia mitondra mpizahatany avy any Pattaya mankany Koh Chang mandritra ny iray na mihoatra andro.
Voarara ny Koh Chang!
Tamin'ny 1982, ity nosy ity dia lasa ampahany amin'ny National Reserve Reserve. Noho izany, tsy mahazo miditra amin'ny fanatanjahan-tena amin'ny rano any Koh Chang: milomano rano, jet skis, sns Ankoatra izany, tsy misy na dia iray aza, na dia ny orinasa famokarana kely indrindra, ary ny ankamaroan'ny nosy dia alain'ny tendrombohitra sy ny virjiny. Noho izany, Koh Chang dia trano fandraisam-bahiny amin'ny tontolo iainana.
Ny tahiry voajanahary an'i Koh Chang
Vidiny amin'ny vidiny ao amin'ny Nosy Koh Chang
Ny haavon'ny vidiny eto dia somary ambany raha ampitahaina, ohatra, Koh Phangan sy Samui.
Trano iray honenana no afaka manofa trano $ 150-200 isam-bolana, efitrano fandraisam-bahiny - $ 100.
Kafe maro no manolotra sakafo mahavoky sy matsiro amin'ny vidiny 35-40 baht. Misy tranombarotra rindran-damina ao amin'ny Ko Chang Tesco, Big C ary Macro. Kely izy ireo eto, fa ny fampidirana vokatra ao aminy dia feno. Ankoatr'izay, ny fampiroboroboana ny vidiny dia tazonina hatrany ary azo atao ny fandoavam-bola amin'ny carte de crédit.
Fitateram-bahoaka any amin'ny Nosy Koh Chang
Fitateram-bahoaka ao Koh Chang. Sangteo
Manodidina ny tendron'ny Koh Chang dia voahodidin'ny lalana asfalt mandeha iray izay manakaiky ny morontsiraka ary mampifandray ireo vohitra eo amin'ny nosy. Amin'ny toerana maro, dia mandalo amin'ny lemaka mivaingana tena mampidi-doza, izay mampidi-doza na dia mpamily za-draharaha aza.
Ny fitateram-bahoaka koa dia mandehandeha amin'ity lalana ity, izay hita ao amin'ny Koh Chang amin'ny alàlan'ny fisafidianana misokatra, songteo ary tuk-tuk.
Mba hahazoana ny seranana mankany amin'ny hotely amin'ny faritra avaratry ny nosy dia mila mandoa vola ianao 50-120 bahtary avy amin'ny morontsirak'i Koh Chang mankany amin'ny iray hafa - 40 ka hatramin'ny 50 baht.
Zavatra tokony hatao ao amin'ny Koh Chang Island
Mandeha elefanta amin'ny Koh Chang
Ny zava-mahaliana indrindra azon'ny mpizaha tany eto amin'ity nosy ity dia mitaingina elefanta sy mamahana ireo biby ireo, aseho miaraka amin'ny fandraisana anjaran'ny bibilava sy voay, “sidina Gibbon”, lakam-basy fitifirana (miaraka am-basy tena izy), fampisehoana afo amin'ny hariva eny amoron-tsiraka.
Fampisehoana afo tao amin'ny nosy Koh Chang
fitsangatsanganana any amin'ny nosy kely tsy misy mponina.
Ary eto amin'ity nosy ity dia misy toeram-pambolena sy fiompiana elefanta iray. Ny fitsidihan'izy ireo dia azo alaina ihany koa ho an'ny mpizahatany. Ny iray amin'ireo toeram-pambolena malaza indrindra dia any akaikin'ny Waterfall Klong Plu. Ho an'ny mpitsidika dia misy fiomanana mamita elefanta manerana ny nosy. Ny fitsidihana ny toeram-piompiana eleph dia mety ho an'ireo mpandeha miaraka amin'ny ankizy izay, noho ny fanampian'ny mpiasa, dia afaka mamahana ireo elefanta ary manampy mihitsy aza handro azy ireo.
Villas, hotely ao Koh Chang
Ao amin'ny Koh Chang, misy safidy isan-trano azo amidy. Misy villa milamina (azo antoka indrindra ho an'ny orinasa sy fianakavian'ny olona maro), bungalows tsotsotra (mifanaraka amin'ny mpitsangatsangana tsy manam-pahaizana) sy trano fonenana (ho an'ireo maniry sy afaka miala voly tsara tarehy).
Saika ny moron-dranomasina ao amin'ny nosy ity dia manana hotely 3 sy 4 kintana, ao anatin'izany ireo trano fandraisam-bahiny 4 kintana Mercure sy Centara. Saika ny trano fandraisam-bahiny na latsaka lavitra ny Koh Chang dia manana ivon-drano fantsakana iray.
Rano: Klong Plu, Klong Chao Luam, sns.
Damba fanaraha-maso akaikin'ny Lonley Beach.
Ny tanànan'i Bang Bao, izay malaza amin'ny fivarotana souvenir sy café kely misy ny trondro sy ny lovia amin'ny ranomasina. Mandritra ny maraina dia misy tsena izay amidy trondro vaovao sy hazan-dranomasina hafa amidy. Ho an'ny vola kely dia afaka mandeha manarato miaraka amin'ireo mpanarato eny an-toerana ny mpizahatany. Ny vohitra ao Bang Bao dia manana ny heviny ihany - ny jiro iray izay hita eo amin'ny marina eo an-toerana.
Torapasika Koh Chang
Bangkok - Laem Ngop Marina ao Trat
Any Bangkok, ny lalana mankany Koh Chang dia azo atomboka amin'ny teboka maromaro:
Seranam-piaramanidina Suvarnabhumi. Avy eto dia mandeha ny fiara fitateram-bahoaka (afaka mandeha an-kalalahana), izay mitondra mpandeha eny amin'ny gara fiantsonan'ny seranam-piaramanidina - Bas Terminal Suvarnabhumi ao anatin'ny 20 minitra. Amin'ity gisy a ity dia mila misambotra fiara fitateram-bahoaka izay mandeha any Trat ianao. Amin'ny fotoam-pizahan-tany, tsara kokoa ny miditra aloha tsy amin'ny gara ao amin'ny seranam-piaramanidina renivohitra, fa amin'ireo iray amin'ireo toby fiantsonan'ny bus roa eto Bangkok tenany, avy amin'ny toerana fandehanan'ireo fiara fitaterana ireo, satria amin'ny fotoana fahatongavany amin'ny gara seranam-piaramanidina, dia mety tsy hanana toerana malalaka intsony izy ireo.
Fiantsonana fitaterana ao Bangkok East - Ekkamai. Any akaikin'ny gara metro Ekkamai. Miala eto eto isaky ny 30 minitra ny fiara fitaterana mankany Trat.
Bangkok Station Bus Avaratra - Mo Chit, mety kokoa rehefa tonga any amin'ny seranam-piaramanidina renivohitra hafa - Don Muang.
Tsangambato Fandresena Metro Station (Tsangambato Fandresena) ao afovoany Bangkok. Avy eto dia avelao tsy tapaka ny minibus (ary matetika) ny fiaran'ny Laem Trat pier. 40 minitra vao afaka ao Suvarnabhumi no mankany amin'io tobiny io.
Safidy iray hafa amin'ny fandehanana ny làlambe avy any Suvarnabhumi mankany Trat dia ny fisambotra fiaramanidina miala amin'ny seranam-piaramanidina renivohitra sy ny taniny ao Trat. Ny sidina toy izany dia tsy misy an'habakabaka Thai Airbus, Air Air. Lafo be ny tapakila. Maharitra 1 ora ny sidina. Avy eo mila mila maka minibus na taxi ianao ao Trat, izay alaina any Laem Ngap marina ao anatin'ny antsasakadiny.
Avy amin'ny gara Ekkamai Bus, 392 ravina ho an'ny Laem Ngap. Avy eo dia mila mifindra amin'ny seranana mankany amin'ny ferry ianao, izay hitondra mivantana any Koh Chang. Ny fitsangatsanganana rehetra hatrany amin'ny gara toera mankany amin'ny nosy dia haharitra 8 ora.
Ireo fiara fitateram-bahoaka avy amin'ireto mpandeha fitateram-bahoaka ity ary mandeha mankany amin'ny torolàlana Langli amin'ny Koh Chang. Ny tapakila ho an'ny mini-bass toy izany dia amidy mivantana eny amin'ny seranam-piaramanidina, akaikin'ny fivoahana faha-8, hita eo amin'ny rihana voalohany.
Fiara iray avy any Bangkok ka Koh Chang no mihoatra ny fiaramanidina avy any Suvarnabhumi mankany Trat, fa amin'ny fomba ara-bakiteny azonao ampiasaina izany safidy izany.
Ireo mpizahatany mijanona any amin'ny iray amin'ireo hotely ao Bangkok mihitsy dia afaka manoratra famindrana any Koh Chang ao amin'ny hotely azy koa. Fa ity safidy ity dia handany vola be. Ny minibus dia hihena kely ny vidiny, tapakila iray amidy amin'ny iray amin'ireo masoivoho fitetezam-paritany, izay any amin'ny toerana metropolitan'i Khaosan Road, izay malaza amin'ny mpizaha tany. Mini-bass toy izany dia afaka mitondra anao any amin'ny seranana amin'ny Koh Chang, ary na hatramin'ny tora-pasika na hotely manokana amin'ity nosy ity aza. Ny fitsangatsanganana toy izany, na dia lafo aza, dia lafo be, noho izany dia asaina ny mividy azy ireo mialoha.
Misy fomba vitsivitsy kokoa hahazoana an'i Koh Chang avy any Pattaya noho ny fomba ahazoana mankany amin'ity nosy ity avy any Bangkok. Ny tena mora indrindra dia ny famindrana avy any amin'ny trano fandraisam-bahiny Pattaya mankany Laem Ngop, na mankany amin'ny voromahery Chang na any amin'ny hotely manokana amin'ity nosy ity. Raha handefa fifindrana ianao dia handeha amin'ny minibus. Haharitra 4 ora ny dia.
Safidy mora kokoa, saingy manahirana kokoa, dia ny fitaomana fiara fitateram-bahoaka avy any Pattaya mankany Trat. Azonao atao ny misambotra azy eo amin'ny 6.00 na 11:20 eo amin'ny fijanonan'ny fiara fitateram-bahoaka, izay hita eo amin'ny sampanan-dalana roa Pattaya - Central ary Sukhumvit. Avy eo dia mila misambotra minibus ianao ao amin'ny Trat, izay hitondra anao mankany Laem Ngap, ary avy eo dia haka ferry izay hitondra anao any Koh Chang. Ny bus avy any Pattaya mankany Trat dia mandehitra 6,5 ora.
Nosy Koh Chang ao amin'ny sarintany
Ny ankehitriny dia eo amin'ny nosy Koh Sichang + vinavina
Eto ambany no ahitanao ny fiaran-toetran'ny toetrandro izay ahafahanao mahita ny toetr'andro ankehitriny ao amin'ny nosy Koh Sichang ary ny toetr'andro mialoha ny telo andro mialoha. Azonao atao ihany koa ny misafidy ny sosona tianao: alon-drano, rivotra, orana, rahona sy ny maro hafa.
Hevitra momba ny Koh Chang Island (Google)
Salanisan'ny salanisa 3 / 5. Isan'ny isa: 2